विट्सबाट न्युनतम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौँः प्रिन्सिपल श्रेष्ठ (अन्तरवार्ता) | KTM Khabar
विट्सबाट न्युनतम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौँः प्रिन्सिपल श्रेष्ठ (अन्तरवार्ता)
२०७३ चैत्र २३ गते १८:१३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवाती भएसंगै विद्यालयहरुले विद्यार्थी केन्द्रित गतिविधिहरुलाई प्रभावकारी हुने गरी विभिन्न माध्यमहरुबाट विद्यार्थीहरुको पहँुचमा पुगेरहेका हुन्छन् भने विद्यार्थीहरु पनि कुन स्कुल पढ्ने ?, कसरी स्कुल छान्ने ? भन्ने विषयको जानकारी लिन चाहन्छन् ।
यसै सन्दर्भमा केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले बौद्ध–६, भुवालडाडा, तिनचुलीमा रहेको विट्स एकेडेमी उच्च मावीका फाउण्डर/प्रिन्सिपल ज्ञान बहादुर श्रेष्ठसंग विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
के छ सर, अहिलेको व्यस्तता, दौढ–धुप कता तिर छ ?
चलिरहेको शैक्षिक सत्रको अन्तिममा छौँ । परिक्षाहरु सकाई सकेका छौँ । आगामी बर्षका लागि विद्यालयले ल्याउने योजनामा पनि व्यस्त छौँ । पक्कै पनि विट्स एकेडेमी धेरैले सुनेको नाम, काठमाडौँको मुटु बौद्ध जस्तो केन्द्रमा रहेको विद्यालय हो विट्स एकेडेमी । हामीले २०५५ सालमा यो विद्यालय स्थापना गरेका हौँ । विट्स एकेडेमीमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण हुनुको कारण चाहिँ विट्स एकेडेमीमा आफ्नै भौतिक संरचना रहेको छ । म आफै पनि फाउण्डर÷प्रिन्सिपल भएको हुनाले मेरै आफ्नो स्वामित्व हो । अहिलेका विद्यार्थीहरु विशेष खेलकुद प्रति विशेष आकर्षित छन् र त्यी खेलकुदका गतिविधिलाई समेट्नका लागि आफ्नै फुटबल ग्राउण्ड रहेको छ । वास्तबमा विट्स एकेडेमी आफ्नै ८ रोपनी जग्गामा सञ्चालित छ । यो विद्यालयमा भौतिक संरचना पनि राम्रो भएको र ईसिय तथा सिसियका कार्यक्रमहरु गर्न सहज वाताबरण छ । ईसियलाई जोडेर कुरा गर्नु पर्दा हाम्रा विद्यार्थीको विट्स एकेडेमी आकर्षण रहनुको प्रमुख कारण भनेको हामीले गर्ने ईसिय गतिविधि हो । अर्को कुरा विट्स एकेडेमी शैक्षिक गतिविधिमा पनि धेरै नै अगाडी रहेको विद्यालय हो । अब्बल दर्जाको विद्यार्थी उत्पाद गर्न विट्स एकेडेमी नै हो । हिजोका दिनमा यहाँबाट उत्पादित भएका विद्यार्थीहरु ईन्जिनियर, डाक्टर बनिसकेको अबस्था र शिक्षकहरु आफ्नो ठाउँमा त छदै छन । सरकारले गत बर्षबाट ल्याएको ग्रेडिङ्ग सिष्ट एस.ई.इ परिक्षामा पनि राम्रो राम्रो जिपिए ल्याएका छन् । त्यसै गरी हामीसंग ल्याब, लाइबे्ररीहरु पनि राम्रो रहेको र हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई यहाँ प्लस टु पनि भएकाले गर्दा विद्यार्थीलाई आवश्यक भौतिक कुराहरु दिने प्रयास गरेका छौँ ।
विट्सको हकमा २०७३ को शैक्षिक सत्रलाई समिक्षा गर्ने हो भने कस्तो रह्यो ?
२०७३ लाई हेर्दा वास्तबमा भुकम्पले हाम्रो विद्यालयलाई असर पारेको थियो । त्यति बेलाको संरचनालाई रिकोभर गर्नका लागि हामी लाग्यौँ अहिले यहाँहरले देख्न सक्नुहुनेछ सबै राम्रो भएको छ तर शैक्षिक गतिविधिलाई हेर्दा दुखका साथ भन्नु पर्छ राज्यले ल्याएको नितिले विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा कमी आएको अवस्थामा पनि विट्सले त्यो स्तरलाई घट्न दिएको छैन । अहिले राज्यले ल्याएको गे्रडिङ्ग सिष्टमले गर्दा विद्यार्थीको पठनलाई कमी ल्याएको छ किनभने अहिले विद्यार्थीको सोचमा फेल भईदैन भन्ने छ । त्यसले गर्दा हामीले अध्यन गराउँदा किन पढ्ने ? भन्ने कुराहरु विद्यार्थीले गर्ने गर्छन । यसले विद्यार्थीहरुलाई कमजोर बनाई रहेको छ । त्यस कारण हामी पनि यस कुराले चिन्ति छौँ र अभिभावकहरु पनि चिन्तित हुनुहुन्छ । ग्रडिङ्ग के हो ? भन्ने कुराको जानकार नहुँदा पनि यस्तो धेरैलाई भईरहेको छ तर यो मानेमा विट्सले आफ्ना अभिभावहरुलाई मिटिङ्ग राखेर अवगत गराएका छौँ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातिसंगैै विद्यार्थीहरु कुन स्कुल पढ्ने ? भन्ने विषयमा केन्द्रित छन, अब यो मानेमा विट्समा विद्यार्थीहरु किन अध्यन गर्ने ?, के भन्नुहुन्छ ?
विट्स एकेडेमीको हकमा २०७४ लाई केन्द्रित गरेर मैले भन्नु पर्दा शुल्कको सन्दर्भलाई जोडेर हामीले भन्ने पर्छ वास्तबमा विट्स एकेडेमी आफ्नै घर, जग्गामा सञ्चालित छ । फाउण्डर, प्रिन्सिपल आफै पनि रहेको कारणले गर्दा न्युन शुल्कले हामी पठन–पाठन गराउँछौँ । न्युन शुल्कमा हामी गुणस्तरिय शिक्षा दिनका लागि हामी अनबरत रुपमा हामी लागि रहेका छौँ । मेरो आफ्नै कुरा गर्दा मैले २५ बर्ष भन्दा बढि शिक्षा क्षेत्रमा नै समर्पित गरि सकेको छु । त्यो कारणले गर्दा पनि हाम्रा अभिभावक ज्युहरुलाई एउटा गुणस्तरिय शिक्षाका लागि विट्स एकेडेमीले विद्यार्थीहरुलाई आवश्यकिय कुराहरु दिने भएको हुनाले पनि आकर्षणको केन्द्र बिन्दु रहेको छ । मैले अघि पनि जोडे वास्तबमा अहिले बच्चाहरु फुटबल खेल्न बढि प्रेरित हुने, बास्केटबल खेल्न बढि प्रेरित हुने भएकाले त्यसका लागि हाम्रो आफ्नै ग्राउण्ड रहेको छ । अहिले हामीले कक्षा कोठाहरुमा पनि सिसि क्यामराहरु जडान गरेका छौँ । जसको कारण विद्यार्थीहरुलाई अनुशासनमा ल्याउनका लागि धेरै भन्दा धेरै जोड दिन्छ । हाम्रा शिक्षक, शिक्षिकाहरुले भुमिका पनि देखिने भएकाले म यहाँबाट प्रिन्सिपल भएको नाताले त्यो कुराको निगरानी गर्छु । जसले गर्दा प्रभावकारी शिक्षामा टेवा पुग्छ ।
अर्को कुरा शिक्षक, शिक्षिका, विद्यार्थी र अभिभावहरुलाई सन्तुष्टि दिन सकेनौ भने यो प्रतिष्पर्धात्मक समयमा विद्यालय सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ । शायद हाम्रो यो भेगमा यत्रो सम्पन्नता भएको विद्यालय विट्स एकेडेमी हो । हामीले शिक्षक, शिक्षिका दिने सुविधामा पनि राम्रै दिएका छौँ र उहाँहरु पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा शैक्षिक पठन–पाठन प्रभावकारी भईरहेको छ ।
ज्ञान बहादुर श्रेष्ठसंगको थप कुराकानी हेर्न तथा भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः